Wafti gaarey gobolka Hayland
27 Jan 27, 2013 - 7:39:55 PM
Waftigaasi ayaa waxa looga hor-tegay ,meel magaalada u Jirta 15-KM waxana Dadkii soo dhaweeyay ka mid ahaa Cuqaasha magaalada, iyo siyaasiyiinta gobolka Hayland.
Waftigaas oo war-kooban siiyay shacabkii Reer Hayland ee
Dhahar ayaa xusey in booqashadoodu salka ku hayso is xog waraysi bulshada dhexdeeda ah.
Waftigaasi oo markii ay magaalada Dhahar soo gaadheen gudaheed shir kooban qabtay waxay sheegeen in Dowlada Puntland ay ay ka sidaan fariin ah hirgalinta maamulka gobolka Hayland iyo sidii Bulshada gobolkaasi ay ula Jaan qaadi lahaayeen nidaamka xisbiyada badan oo Dowlada Madaxwayne C/raxmaan Faroole ay horay u balan qaaday.
Gudoomiyaha gobolka Hayland Maxamed Faarax [Jeentaro] oo xusay inay ku faraxsanyihiin soo dhawaynta waftigaasi, wuxuu sheegay isaga oo afka maamulka gobolka Hayland ku hadlaya inay tani tahay Guul mar hadii Dowlada PL ay ka run sheegtay nidaamkii Xisbiyada badan.
Wasiirka Xanaanada Xoolaha ee Puntland Siciid Xasan Shire oo waftigaasi Booqashada Hayland ku yimi Hormuud u ahaa ayaa
ka sheekeeyay ujeedka safarkooda isla markaana ay qayb wayn ka yihiin wufuud badan oo Dowlada PL u kala Dirtay sideeda gobol ee PL ka kooban tahay kuwaasi oo bulshada ay matalaan kala hadlaya sidii dadka loo gaadhsiin lahaa nidaamka Xisbiyada badan.
Wasiirka ayaa ku dheeraaday in Madaxwaynaha Puntland uu ahmiyada koowaad siinayo hirgalinta nidaamka Xisbiyada badan isla markaana laga gudbayo hab qaybsigii qabiilka.
Wasiir ku xigeenka shaqada iyo shaqaalaha Puntland Siciid Daahir Qodax oo shirkaasi hadal ka so Jeediyay ayaa dhankiisa xusay inuu ku Faraxsanyahay sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay degmada Dhahar ee xarunta Gobolka Hayland.
Guud ahaan dadkii Halkaasi ka hadlay ayaa isku raacay inay taageeranyihiin Xisbiga talada dalka haya ee Horseed.
soo wada duuboo Dowlada Puntland ayaa Wasiiro iyo xildhibaano u dirtay Guud ahaan Gobolada Puntland waxana ujeedkaasi uu salka ku hayaa sidii shacabka looga dhaadhicin lahaa Xxsbiga Horseed oo ah kan Dowlada.